Singapore SWEEP Result နောက်ဆုံးထွက် - Singapore Sweep Pools - 4dinsingapore | Malaysia Magnum၊ Singapore Pools 4D ToTo Sweep
Singapore SWEEP ရလဒ်နောက်ဆုံးထွက် - Singapore Sweep Pools - 4dinsingapore
Singapore Sweep Result၊ နောက်ဆုံး Singapore Sweep Result၊ Singapore Pools Singapore Sweep Result Past Numbers၊ Singapore Sweep Winning Numbers၊ Singapore Sweep Result ယနေ့၊ Singapore Sweep Prize၊ SG Sweep ။
Draw No. 1042
1st ဆု @ $2,300,000
2099284 3273198 3856624
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ
1640588 2243291 2303749 2312828 2967930
3092257 3491050 3697994 4327513 4457923
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ
1664657 1942547 1977202 2062823 2161635
2198944 2316123 3033524 4144565 4416300
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ
1330522 1349583 1398158 1529012 2036765
2179233 2367072 2384447 2500304 2602254
2778257 2955941 3029992 3033787 3088650
3444054 3484782 3510456 3589017 3686888
3711000 3824118 3870215 3885797 3919352
4181933 4230021 4299772 4421325 4448384
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ
1559731 1712675 1759789 1764859 1814013
1957650 2021371 2107141 2230003 2260459
2294260 2298700 2298759 2413804 2585186
2744013 2853554 3025836 3218145 3409561
3635800 3673982 3688518 3727950 3806434
3876302 4206566 4382026 4382139 4432239
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု
1189845 1279979 1314741 1328950 1382418
1442196 1532578 1552244 1613898 1656673
1673911 1757123 1807228 1998656 2075690
2257799 2274232 2343873 2362608 2399204
2563419 2585997 2644641 2674082 2674926
2703474 2711291 2902669 2921941 3037314
3054779 3165785 3175432 3228791 3312428
3381730 3388516 3615297 3651168 3714643
3745897 3831235 3840732 3953257 3975502
3990446 4050210 4112520 4381054 4428381
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ
85 85 99
Singapore Sweep Ticket ကို ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
ထီကစားခြင်း သို့မဟုတ် လောင်းကစားခြင်းတွင် ကံစမ်းခြင်းသည် လူအများ၏အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းက နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာလာဖို့ ပါဝင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အားလုံးက ပျော်စရာပါပဲ။ Singapore Sweep ဖြင့် သင်သည် ကြီးလေးသော အသုံးစရိတ်များ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း၊ သင်သည် အမြဲတမ်း ငွေအမြောက်အမြား ရရှိရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။ Singapore Sweep ထီ၏ အမျိုးမျိုးသောအသေးစိတ်အချက်များအပြင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူတော်တော်များများ မသိကြပါ။ ၎င်းတို့အတွက် အောက်ပါကဏ္ဍတွင် လမ်းညွှန်တစ်ခု ပေးထားပါသည်။ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်သည် စင်ကာပူရေကူးကန်အတွက် လက်မှတ်များကို မည်သို့ဝယ်ယူရမည်ကို နားလည်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူရေကူးကန် ရလဒ်များ.
Singapore Sweep ကစားနည်း အခြေခံလမ်းညွှန်
Singapore အတွက် လက်မှတ်မဝယ်ခင် Sweep and check out လုပ်ပါ။ စင်္ကာပူရေကူးကန် ရလဒ်များဝယ်သူများသည် အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလတ်များကို နားလည်ရပါမည်။ အောက်ပါကဏ္ဍတွင်၊ Singapore Sweep လက်မှတ်များဝယ်ယူရန်အတွက် ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လက်မှတ်တစ်ခုစီသည် $3 ဝန်းကျင်ကျသင့်ပြီး ၎င်းတို့ကို အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ပြည်တွင်းရောင်းချသူများထံမှ ဝယ်ယူနိုင်သည်။
တစ်ရက်လျှင် လက်မှတ်ပေါင်း ၃.၅ သန်းကျော် ရောင်းချပြီး ဝယ်ယူသူအနေဖြင့် လက်မှတ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ကံစမ်းမဲကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ လစဉ်ပထမဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဤကံစမ်းမဲကို ညနေ ၆ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူအားလုံးကို ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားထားသော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် အချိန်ကွာခြားနိုင်သည်။
ပုံဆွဲအပ်ဒိတ်များ၊ အချက်အလက်များနှင့် ရလဒ်များကို အွန်လိုင်းတွင် အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဤအချက်အလက်အားလုံးကို Singapore Sweep ၏ ဒေသတွင်း လက်လီရောင်းချသည့် ယူနစ်တွင် ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။